Maxay yihiin heerarka ugu dambeeyay ee SEO?
Maalmahan, Google ayaa muujinaya natiijooyinka raadinta, kuwaas oo ka fog kuwa badanaa dhaqameed (waxaan loola jeedaa uun goobaha dabiiciga ah) waxaan aragney dhowr sano ka hor. Nidaamka raadinta ee Google, iyo sidoo kale heerarka asaasiga ah ee SEO, sii wadaan isbedelka. Hadda mashiinnada raadinta ayaa liis gareynaya wax ka badan waxa aad codsanaysid - sida SERPs ee Google, iyo sidoo kale Yahoo iyo Bing ayaa hadda daboolaya sawirrada la xidhiidha, fiidiyoowga, warbaahinta bulshada, iyo khariidadaha khatarta ah. Sidaa darteed, haddii aad sharfineyso baabuurta iyo iibka sida milkiilaha internetka, hubi inaad eegto qaar ka mid ah heerarka ugu muhiimsan SEO ee maanta. Miyuu websitkaagu u baahan yahay muuqaal internetka ah oo wanaagsan iyo dardaaran dheeraad ah? Ka dibna aynu u dallacno dhowr ka mid ah hababka casriga ugu fiican ee Raadinta Mashiinka Raadinta:
SEO-ga maxaliga ahi waa meesha ugu muhiimsan ee aad leedahay haddii ganacsigaaga uu ku qanacsan yahay degaanka liisaska iyo xoogga saarida in lagu calaamadeeyo calaamada adoo raacaya Khariidadaha Google, tusaale ahaan. Marka la eego heerarka ugu dambeeya ee SEO ee ku-ool-socodka maxalliga ah, waxaan ku talineynaa inaan u socdo:
Citations. Hayso jeeg laba jeer ah si aad u hesho macluumaad sax ah oo ku saabsan ganacsigaaga oo ku jira liiska ugu caansan ee internetka sida ugu macquulsan. Kaliya waxaad ku bilowdaa liiska Google. Qodobka ugu muhiimsan ee halkan waa shuruudahaaga, waxaan loola jeedaa liis kasta oo aad leedahay waa mid midaysan, e. g. , haddii aad go'aansato inaad isticmaasho wax sida "Str. "Turjubaan gaaban oo" Street "ku yaal boggaaga Google Meelaha, ka taxadar liistada liistada si aad u muujiso si la mid ah.
Goobaha Google. Daryeelka SEO ee loogu talagalay boggaga internetka, waxaad si sahlan u sameeyn kartaa walxo isku mid ah boggaaga Google Meelaha. Hayso si fiican oo ay ku jiraan qaybaha saxda ah ee saxda ah. Sidoo kale, haddii ay khuseyso, hubi inaad samayso xiriirka saxda ah ee u dhaxeeya boggaaga iyo bogga internet-ka ee soo dega magaalada.
joogitaan xoog leh oo online ah. Inta badan, waxaa jira aragtiyo Google oo kaliya lagu soo bandhigay liiska SERPs. Sidaa darteed, waxaad ku dhisi kartaa joogitaanka internetka oo aad u awood badan si aad ganacsi uga hesho adoo eegaya ilo kale sida Superpages, La-taliyaha Safarka, Yelp, iyo wixii la mid ah.
Waxyaabaha xiga waa inay noqdaan kuwo ku habboon heerarka casriyeynta ee casriga ah ee ka shaqeynaya gudaha warbaahinta bulshada. Aynu wajahno - wakhtiyadaas raadinta lafteeda iyo hababka warbaahinta bulshada ayaa si gooni ah u imanaya horayba. Maanta, darajada internetka ee shabakada internetka ayaa si xoog leh ugu tiirsan calaamadaha bulshada ee kala duwan, sida likiyada Facebook, saamiyada ku yaala Twitter, iwm. Intaa waxaa dheer, hadda natiijooyinka raadinta ayaa noqotey mid xitaa shakhsi ahaan loogu talagalay isticmaale kasta. Taasina waa sababta ay u shaqeyneyso Suuqa Warbaahinta Bulshadu waa MUST.
Ka dib oo dhan, samaynta wax-ku-oolnimada ereyada muhiimka ah iyo jumladaha muhiimka ah, isku day inaad ka fikirto dad badan oo nool, halkii ay ka iman lahaayeen raadraacayaasha raadinta. Xusuusnow, baaritaanka erayga saxda ah ee hadana marwalba wuxuu ahaa laf-dhabarka heerarka guud ee SEO-ga. Marka la eego xaqiiqada casriga ah, si kastaba ha ahaatee, waafaqsanaanta boggaaga iyo keywords-ka waa in ay ahaataa mid waxtar badan u ah dadka isticmaala dhabta ah inta aan ka horeyn. Taasi waa sababta aad u joojinayso inaad ka fekerto ereyada muhiimka ah sida xog farsamo. Samaynta cilmi-baaris adag, maskaxda ku hay ujeedooyinka dadka nool ee isticmaali doona ereyada muhiimka ah ee codsiyada ugu-xun Source .